Tanzania: Fisamborana bilaogera noho ny hosoka tamin’ny sarin’ny filoham-pirenena · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Jona 2018 4:27 GMT
Hatramin'ny omaly [18 Jona], mandeha ny fifanakalozan-dresaka ao amin'ny tambajotran-tserasera Tanzaniana Jamii Forum. Nandefa vaovao sy ny sarin'ilay bilaogera nosamborina ny Swahili Time androany. Malecela Peter Lusinde, 39 taona, mpanolo-tsaina momba ny kajimirindra avy any amin'ny faritra Essex, Fanjakana Mitambatra izany.
Araka ny vaovao nalefan'ny Swahili Times [toa tsy hita intsony ny vaovao], nahangona vaovao ampy ny polisy Tanzaniana miara-miasa amin'ireo namany Britanika fa i Lusinde tokoa no tompon'ny bilaogy Ze Utamu, nakatona tamin'ny febroary teo. Niseho ity fanakatonana ity taorian'ny famoahana sary namboamboarina izay mampiseho ny filoha Tanzaniana Jakaya Kikwete amin'ny sary mamoafady.